Barack Obama Oo ku guulaystay Bilad-Sharafta Nabada”Nopel Peace Prize” Isaga Oo hayay Xilka madaxwayne nimo In ka yar 10 Bilood « SAWNEWS NETWORK
« Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Somaliland Ee SOLJA Oo Taageeray In Suxufi Ku Biiro Komishanka Doorashooyinka
Maxkamadda Gobolka Sool oo xukun dil ah ku fulisay Nin Aabihii dilay »
Barack Obama Oo ku guulaystay Bilad-Sharafta Nabada”Nopel Peace Prize” Isaga Oo hayay Xilka madaxwayne nimo In ka yar 10 Bilood
Madax-wayne Barack Obama ayaa maanta si lama filaan ah loogu dhawaaqay inuu ku guulaystay Bilad-Sharafta Nabada amma Nopel Peace Prize-ta. Barack Obama Oo ka hadlaya Bilad sharafta la siiyay aya ku tiraabay” Aad baan ula yaabanahay, ayna iiga khajilsiisay, In Bilad-Sharafta Nabada ku guulaysto anigoo xilka madax-wayne nimo ku sugnaa kaliya in ka yar 10 bilood.
Isagoo ka hadlaya aqalka cad ee looga taliyo wadanka Maraykanka saacado kadib markii Kooxda Norwegianka aha ee bixisa Bilad sharafta Nabada ay U magacaabeen inuu ku guulaystay Biladan. Waxaanu yidhi” Biladan la I siiyay waa inay noqotaa” Dhawaaq ficil”. “ Aduunku waxa uu imika ku jiraa carqalado aanu wajihi Karin qofkaliya iyo qaran kaliya toona. Ayaa ka mid ahaa hadaladii Obama.
Kooxda bixisa Nopel Peace Prize-ta ayaa sheegay in Obama uu ku mutaystay dadaalo hor leh Oo uu ka galay diblomaasiyadda iyo wada shaqaynta dalalka caalamka.
“ In yar Oo ka mid ah dadka ku dhaqan aduunka ayaa sida Madax wayne Obama soo jiidatay dareenka dadka mudo gaaban gudaheed, dadkoodana u balan qaaday mustaqbal wanaagsan” ayay yidhaahdeen kooxda biladda gudoon siisay Madax wayne Obama.
Madax-wayne Obama Oo saaka hadalkiisii u horeeyay ka jeedinaya Beertiisa laga soo bilaabo markii uu saaka ku waabariistay Bushaaradda Biladda Uu ku guulaystay sheegay in ay tahay tani Bilow gii shaqadiisa.
“Ma dareemayo inaan u qalmo inaan manta la safto rag aduunka badalay Oo la gudoonsiiyay Bilad-sharaftan Nabada” . Barack Obama waxa uu sheegay in hadafyaddiisa ay ka mid ka yihin in la baabiiyo quwadda hubka Nukliyeerka ee caalamka ay adagtahay in la gaadho wakhtiga noloshiisa iska daa inta uu xilka hayee.
Ugu danbayntii waxa Uu Barack Obama yidhi” Waxan Ogahay taarikhda biladan In aan loo dadka loo siin jirin uun In lagu sharfo laakin in lagu dar-dar galiyo hawlaha ay wadaan”
Sanadka 2009 ayaa waxaa U magacawnaa 205 qof Nopel peace Prize-ta. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadka la soo xushay Raiisal Wasaaraha Zimbabwe Morgan Tsvangirai iyo Hu Jia ee Chines-ka ah.
Aragtida dadwaynaha iyo hogaamiyaasha caalamka ayaa lahaa wax-soo dhaweeya iyo wax-ka muujiya dareen la yaab ah.
Madaxwayne Obama Oo ah Madax-waynihii ugu horeeyay Ee Maraykan ah Ee ku guulaysta ilaa sanadkii 2002 Markii Uu ku guulaystay Jimmy Carter. Sanadii 1919 Waxa sidoo kale ku guulaystay Woodrow Wilson. Sanadkii 1906-na Theodora Roosevelt.
Biladan waxaa maskaxdeeda Lahaa ninka Swedishka ah Alfred Nobel Oo ahaa ninkii ikhtiraacay Daynamadda, Waxaana Loogu hor-gudoonsiiyay sanadkii 1901.
Wakhtigaas Oo ay Sweden la midaysnayd Norway Biladda waxa lagu sameeyay Baarlamaanka Norway, inkastoo Akaadimiyadda Swidishka ahi bixiyaan abaalmarinadda kale.
Xafladda Gudoon siinta Biladda Sharafta Nabada Oo ka dhici doonta Caasimadda Norway, Oslo, 10 December ee Sanadka ayaa Uu balan qaaday Madaxwayne Obama in uu ka qayb-gali doono.
This entry was posted on October 9, 2009 at 6:29 pm	and is filed under News (Warka).